Ọganihu nke University agaghị eme ka ị banye El Dorado, Buhari ka ị gụchaa akwụkwọ
Ọganihu nke University agaghị eme ka ị banye El Dorado, Buhari ka ị gụchaa akwụkwọ——————————————————————-√
President Muhammadu Buhari gwara ndị gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Nnamdi Azikwe, Awka, Anambra State, na akara mmụta mahadum agaghị abanye ha na El Dorado.
Ọ dọrọ aka ná ntị na ogo mmụta mahadum abụghị tiketi nri, na-ekwu na, kama nke ahụ, akara ma ọ bụ diploma ga-enyere onye na-ejide ya aka ịnagide ihe ịma aka nke ndụ, otu n’ime ha, ọ kwuru, bụ enweghị ọrụ ọrụ ntorobịa.
Buhari kwuru nke a n’ememme Fraịde nke 13 maka ịkwado ọkwa dị elu, postgraduate diplomas na ọkwa nsọpụrụ na Mahadum Nnamdi Azikwe, Awka, Anambra State.
Mgbe ọ na-ekwu na nchịkwa ya ga-ekwu banyere enweghị ọrụ na enweghị ọrụ, Buhari kpọrọ ndị ntorobịa ka ha nakweere ohere ndị Gomenti Gọọmenti etinyela n’ọnọdụ iji mebie ọnọdụ enweghị ọrụ maka oge ahụ.
O kwuru, sị, “A dọrọ gị aka ná ntị na ogo na mahadum anaghị eme ka ị banye El Dorado. Kama nke ahụ, ọ na-akwadebe gị n ‘ike iji nagide nsogbu ndị na-agbanwe agbanwe nke ndụ, nke enweghị ọrụ na-eto eto bụ akụkụ dị egwu.
“Gọọmentị Gọọmenti ga-anọgide na-enwe nsogbu n’igosi nsogbu ndị ntorobịa na-enweghị ọrụ na ndị na-enweghị ọrụ site na edemede nke mmemme.”
O depụtara atụmatụ ndị dị otú a gụnyere: N-Power, Ụlọ Ọrụ Banyere Mmepụta Ahịa nke Ndị Nlekọta Ndị Nlekọta Ahịa na Central Bank of Nigeria na Bank of Agriculture Support Schemes.
Buhari, onye Minista State for Education, bụ Anthony Anwuka, gụrụ akwụkwọ ya, jara aka na mahadum maka nkwalite mmepụta ihe na ụlọ akwụkwọ.
N’okwu ya, onye isi oche nke mahadum, Prọfesọ Joseph Ahaneku kwuru na nzukọ 13 nke ụlọ ọrụ ahụ bụ maka afọ 2017/2018.
Enweghị ihe dịka puku akwụkwọ isii na narị ise na-erughị akwụkwọ, enwere ogo asatọ, 182 postgraduate diplomas, ebe 763 nọ na Masters degree na 269 nwetara PhD degrees.
Obi nke Onitsha, Igwe Alfred Achebe, onye nnochite anya Babagana Kingibe na Chief Emeka Offor nwere nkwenye nke doctorate na sayensị, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na atụmatụ na ịzụ ahịa.
Ọganihu nke University agaghị eme ka ị banye El Dorado, Buhari ka gụọ akwụkwọ
fuel subsidy:-Kachikwu said he will advise President Buhari on what to do.
China iji kwado ego dolla $ 250 Na Ibadan Dry Port: – Buhari
Previous Previous post: University degrees won’t necessarily usher you into an El Dorado, Buhari to graduands
Next Next post: Hazard has dropped the biggest hint that he will commit his future to Chelsea